News 18 Nepal || अमेरिकी डलरसहित यस्तो छ आज विदेशी मुद्राको विनिमयदर
अमेरिकी डलरसहित यस्तो छ आज विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौं । मंगलबार अमेरिकी डलरसहित अन्य केही देशको विनिमयदर घटबढ भएको छ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर अनुसार एक अमेरिकी डलरको खरिददर १ सय १५ रुपैयाँ ७२ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय १६ रुपैयाँ ३२ पैसा तोकिएको छ ।
एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १ सय ६२ रुपैयाँ २७ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय ६३ रुपैयाँ १२ पैसा तोकिएको छ। त्यस्तै जापानी यनको खरिददर १० रुपैयाँ ९६ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ११ रुपैया १ पैसा तोकिएको छ ।
त्यस्तै एक बहराईन दिनारको खरिददर ३ सय ६ रुपैयाँ ९२ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय ८ रुपैयाँ ५१ पैसा तोकिएको छ । एक मलेसिया रिंगिटको खरिददर २८ रुपैयाँ ६३ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २८ रुपैयाँ ७७ पैसा तोकिएको छ ।
एक साउदी रियालको खरिददर ३० रुपैयाँ ८५ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ १ पैसा तोकिएको छ । एक कतारी रियालको खरिददर ३१ रुपैयाँ ७८ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ९५ पैसा तोकिएको छ ।
त्यस्तै एक कुवेती दिनारको खरिददर ३ सय ८२ रुपैयाँ २५ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय ८४ रुपैयाँ २४ पैसा तोकिएको छ । त्यस्तै कोरियन वन एक सयको खरिददर १० रुपैयाँ ४१ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रीदर १० रुपैयाँ ४६ पैसा तोकिएको छ ।
बढ्याे सुन चाँदीको मूल्य, ताेलाकाे कति ?
आज सुनचाँदी प्रतितोला कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, कति छ आजको मूल्य ?
महँगो इन्धन : खरिद ५४ रूपैयाँ हुँदा कर ५५ रूपैयाँ